Ilanga liphuma kuphi? Impendulo obungayilindelanga | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela izikhathi eziningi ubufuna ukuziqondisa futhi ufune lapho ilanga liphuma khona. Kusukela useyingane uhlale utshelwa ukuthi iLanga liyaphuma empumalanga bese liyashona entshonalanga. Futhi, bekulokhu kunezimpawu ezithile zalo kumabhayisikobho asentshonalanga. Lokhu kushona kwelanga okujwayelekile kwe-orange nelanga elikhulu eliwela phezu komugqa womkhawulo kuyisici sokushona kwelanga. Kodwa-ke, ukuphuma nokushona kwelanga kuyahluka kakhulu kuye ngokuthi ukuphi. Ilanga liphuma kuphi ngempela?
Kulokhu okuthunyelwe sizokutshela konke odinga ukukwazi ngakho futhi uzokwazi ukuzifundisa ukuzibeka kangcono kakhulu ngokukuhola kusihlabani sethu esikhulu. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngale ndaba? Qhubeka ufunde ukuthola konke.
1 ILanga emiphakathini yasendulo
2 Amaphuzu wekhadinali
3 Ilanga liphuma kuphi ngempela
4 Ukubaluleka kwama-equinox nama-solstices
ILanga emiphakathini yasendulo
Inkanyezi yethu enkulu ye Uhlelo lomkhathi ilungiswe ku-Universe. Kodwa-ke, ngokubuka komhlaba, nguyena obonakala ngathi uyahamba kusukela lapho, usuku lonke, luguqula isikhundla salo. Ukuhamba kwento kwenzeka maqondana nomqapheli. Ngalesi sizathu, kusukela kwimpucuko yasendulo kwakucatshangwa ukuthi yiLanga elihambayo hhayi uMhlaba.
Kunemiphakathi eminingi, kusukela ezikhathini zasendulo, eye yanikeza inkolo ekhethekile ezintweni zemvelo. Kwabaningi babo, iLanga laliyinto ehlonishwayo kunazo zonke, njengoba kuyilo elalikhanyisela amazwe ethu futhi likhanyisela izitshalo. Ukutadisha ukunyakaza kwabo kusizile ukudala amawashi asendulo lapho amahora ayesuselwa endaweni yeLanga esibhakabhakeni ekupheleni kosuku.
Lokhu kuphenywe kanjalo ngesimo seLanga nokuziphatha kwezinsuku. Kulezi zinsuku, siyazi ukuthi inani lamahora emini esinalo liyahluka phakathi kwezinkathi zonyaka. Lokhu kungenxa ye- ukunyakaza kokujikeleza, ukuhumusha kanye ne-nutation yoMhlaba. Ngaphezu kwalokho, okusithinta kakhulu ukushisa namakhaza ukuthambekela kwemisebe yelanga okushaya ngayo ubuso bomhlaba hhayi ibanga eliphakathi koMhlaba nenkanyezi.
Lokhu kuhlale kunososayensi abangaphumuli, kwaze kwaba kamuva kwatholakala ukuthi nguMhlaba ohambayo hhayi iLanga. Kodwa-ke, liphuma kuphi iLanga futhi lishona kuphi? Ngokuya ngesikhundla sombukeli, kungashintsha noma kuyindlela engenaphutha yokusiqondisa nokusiqondisa?
Ubumnyama bekulokhu kuhlobene nokuziphatha okubi nokungalungile. Ngalesi sizathu, iLanga lifundwe kusukela kwimpucuko yasendulo. Bebelokhu bezibuza ukuthi ilanga liphuma kuphi. Nokho, yize kubonakala kunengqondo, akunjalo.
Yilapho umsebenzi ungena khona amaphuzu kaKhadinali. Luhlelo oluyinkomba olusisiza ukuthi siziqondise emephini futhi sazi ukuthi singaziqondisa kanjani ngaso sonke isikhathi. La maphuzu ayikhadinali abekiwe emikhawulweni yomhlaba, ukuze afane kuwo wonke umuntu. Lawa maphuzu asemqoka afanele emhlabeni wonke: iNyakatho, iNingizimu, iMpumalanga neNtshonalanga.
Ngokomqondo, ilanga liphuma eMpumalanga bese lishona eNtshonalanga. Sikuzwile lokhu kushiwo izigidi zezikhathi ezivela ezigidini zabantu. Uma sidukile maphakathi nensimu, impela umuntu uzobe ethe "iLanga liyaphuma eMpumalanga bese liyashona eNtshonalanga." Noma kunjalo, akulula kangako ukwazi, ngoba kunokungahambisani okuthile okuzosenza singabaze lesi sitatimende.
Ilanga liphuma kuphi ngempela
Kumele wazi ukuthi iLanga liyaphuma eMpumalanga njengoba kuhlale kushiwo, kepha likwenza kabili ngonyaka. Lokhu kungenxa yokuthi ukuthambekela koMhlaba nokunyakaza kwawo okujikelezayo nokuhumusha kwenza amaphuzu abalulekile lapho iLanga liphuma khona awahlali njalo endaweni eyodwa.
Lapho uthi ibekwe eNtshonalanga, kuzokwenzeka ngendlela efanayo naseMpumalanga. Iphuma kabili ngonyaka. Lokhu kuhlobene nalokhu esesikushilo ngenhla mayelana nobude bezinsuku kuzo zonke izinkathi zonyaka. Kuya ngokuthambekela lapho imisebe yelanga ifinyelela khona ebusweni bomhlaba kanye nokunyakaza kokuhumusha uMhlaba onakho ngesikhathi esithile sokuzungeza kwawo, ILanga lizosondela eduze kwephuzu eliyinhloko e-East noma cha. Ikwenza kuphela kabili ngonyaka, ngesikhathi sentwasahlobo nokuwa kwama-equinox.
Lezi yizikhathi lapho uMhlaba uqondaniswe ngendlela neLanga ukuthi imisebe yayo ingaphuma kahle eMpumalanga bese isetha eNtshonalanga.
Ukubaluleka kwama-equinox nama-solstices
Ukuze wazi ukuphuma nokushona kwelanga, ama-equinox nama-solstices yizinto ezibaluleke kakhulu. Ngesikhathi sentwasahlobo nokuwa kwama-equinox yizona kuphela izikhathi ezimbili lapho imisebe yelanga isifinyelela khona ngokuningana ngangokunokwenzeka ebusweni bomhlaba. Ngakolunye uhlangothi, ngesikhathi sama-solstices, siyabona ukuthi sinemisebe ethambekele kakhulu kunanini ngaphambili.
Lezi zinto zibhekelwa ukwazi inani lamahora okukhanya kwelanga esizoba nawo usuku lonke nasekupheleni kwezinkathi. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukulungisa amaphuzu abalulekile kanye nokwazi kahle isikhundla seMhlaba maqondana neLanga ekuhambeni kwalo lokuhumusha ukuze lazi kahle ukuthi iLanga lizophuma kuphi.
Phakathi nawo wonke unyaka ngaphandle kwama-equinox, iLanga liphuma ngokuya ngasenyakatho entwasahlobo nasehlobo, kanti ezinyangeni ukuwa okubandayo nobusika kuzophuma kubheke eningizimu kancane.
Njengoba ukwazi ukubona, akuyona yonke into emnyama nomhlophe kule nto yezinkanyezi. Futhi kungashiwo kahle ukuthi iLanga liphuma eMpumalanga noma ukuthi liyashona eNtshonalanga. Ngakho-ke, ukusihola emkhakheni, singasebenzisa ezinye izinhlobo zezimpawu ezinokwethenjelwa noma silinde kuze kube yilapho izikhathi zisondele kakhulu kuma-equinox.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Lapho kuphuma khona ilanga
Isimo sezulu esishisayo noma sezulu saseChina